Indle owawusemzini womzalwane - iphuzu obukhulu. Iqiniso lokuthi ezindaweni suburban ngokuvamile ungenalo eyodwa amanzi ohlelweni. Nokho, isivuno lesi lungiselelo. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukwakha amapayipi wendawo. Uma ufuna ukwakha ithangi ukonakala emasongweni ngezandla zabo, kufanele ube ukuqala ukucabangela zonke izici inqubo.
Ngokuyinhloko, ukwakha isakhiwo ilula. Qoqa impahla kanye ithuluzi oyifunayo: ok, ukhonkolo indandatho sealer, ukhonkolo, ububanzi kabi we tube (mhlawumbe eyenziwe ngepulasitiki) ukwahlukanisa. Ngokwemvelo, kufanele ukhethe indawo efanele ukwakha isakhiwo esinjalo. tank Septic emasongweni ngezandla kufanele eyakhelwe indawo lapho etafuleni amanzi kujule khona, akukho ingozi ukugcwalisa kahle amanzi ncibilika. Futhi, akudingeki ukuklama ukwakhiwa kodonga endlini. Nokho, ikude kakhulu, kakhulu, akufanele eyakhelwe, ngoba mkhulu yokuhamba kancane ipayipi abakhwabanisi, le namadreni kancane ukuwela kahle.
Ukuze uqale kuhlomisa indle kufanele kube ne earthworks. Pit kufanele abe ububanzi efanayo iringi. Ukwenza ithangi ukonakala emasongweni ngezandla udinga downspouts kwakungasehlane laseBeti slant okuncane ekwenzeni ngcono isimo. Phakathi ukufakwa izakhi eziyisisekelo udinga usizo, njengoba babe nesisindo bahlonipheke futhi wehlise ngokwakho ngeke aphumelele emseleni. Ngokuqondene nenani izakhi isiyingi, ke kuncike womthombo ukujula. Ukubala izilinganiso indle, cabanga ngalokho yangosuku yamanzi isetshenziswa kanye bangaki abantu kukhona emndenini.
Akunzima ukwakha ithangi ukonakala emasongweni. Izinhlaka wesifunda ingaphinda ungenisa ngokuzimela. Kubalulekile ngesikhatsi operation ungakhohlwa mayelana nokubekwa uphawu ngokuhlanganyela. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi amanzi angcolile okunobuthi ayikwazanga seep walihlanganisa nomhlabathi phansi. Ukuze uphawu ukusetshenziswa kwamanzi ingilazi, ivuse nge usimende nosimende.
Isikhala esisele phakathi umhlaba netintfo longatibona izindonga kumele embozwe inhlabathi. Ngale ndlela uzokuqinisa kahle. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi ukubeka ithangi ukonakala emasongweni ngezandla zabo, iseluleko njalo ungaxhumana onguchwepheshe.
Ukuze indandatho lingabulewe ngu ukuchayeka njalo umswakama, qiniseka babahlukanisa esebenzisa izimali ezikhethekile. Manje ungakwazi ukuya noku- concreting phansi. Ukuze wenze lokhu, ukwakha embhedeni esihlabathini, okuyinto ungakwazi ukwengeza kancane amatshe emihle noma itshe olwembiza. Ngokwemvelo, lokhu kusho ungqimba impahla ukuba kahle ohlangene. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungenza i screed ukhonkolo.
indle Kwethulwa kufanele abe ukupholisa dweba ikhava, okuvame ifafazwa nge ungqimba elincane emhlabeni. ethangini elivaliwe kungaba ukhonkolo noma ipuleti metal.
amathangi Septic zakhelwe ka kwagcizelela ukhonkolo izindandatho ngokushesha futhi ukukhonza isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, kulula ukuhlanza. Nokho, i-ukulethwa futhi ukufakwa izakhi kudingeka imishini ekhethekile, ukuze ingxenye zikhiywe. Ngaphezu kwalokho, kufanele kwenzeke wokuhlanza kahle usebenzisa umshini assenizatorskaya.
Indlela yokwenza phansi self-yokululama for egalaji ngezandla zakhe?
Wegoldi of Sberbank eRussia
Izikhangibavakashi Ancient Greece. Umlando Ancient Greece
Pechory: nokuzwa, indawo Upper Pechory, ikakhulukazi